HP laghachi azụ: Ekwesịrị ịnyegharị aha ya "Compaq" | ECommerce ozi ọma
HP dị azụ: Ekwesịrị ịnyegharị aha ya "Compaq"
HP na-achịkwa ahịa PC zuru ụwa ọnụ. Eleghị anya ị ghọtaghị etu nke ahụ si dị ịtụnanya, ya mere, lee ihe atụ maka nke a: Ọ dị ka eju mmeri meriri agbụrụ megide ndị agbụrụ kachasị mma n'ụwa. I ghaghi ichoputa ma nka abughi dike.
Nke a abụghị Companylọ ọrụ Apple na-ekpughe iPhone ma ọ bụ iPod ọhụrụ Site na ịgbasa ahịa, nke a bụ ụlọ ọrụ na-agbanye osooso n'oge mgbe onye ọ bụla kwuru na ha na-aga n'ụzọ na-ezighi ezi, n'otu ụzọ ahụ, m gbachiri nkatọ banyere nkatọ ndị a niile.
Dị ka ọ masịrị ya, enwere karịa. Nke a bụkwa ụdị ọhụụ ọhụụ nwere usoro ọhụụ, mana ndị mmadụ ka na-ahụ aha HP ebe niile, gụnyere echiche ọjọọ na oke nzukọ ọjọọ nke ụlọ ọrụ a nwere.
Nke a bụ ihe atụ zuru oke nke ihe kpatara akara ga-eji tụlee ịgbanwe aha ya, na Compaq, bu akara di ike na aka ya, nwere ike ịbụ azịza maka HP.
Naanị m na-atụ egwu nke Ọrụ HP. O doro anya mgbe Meg Whitman kwuru na HP enweghị ohere ọ bụla ịga nke ọma. O kwenyesiri ike na PC na ndị na-ebi akwụkwọ ebiela, na-abụghị ụgwọ ụlọ ọrụ ahụ ji.
Ugbu a akara HP enweghị ihe ọ bụla gbasara ya. Ihe akaebe nke a bụ na ahịa ha dị elu karịa ka ha dịbu. Nsogbu bụ ihe oyiyi nke ụlọ ọrụ ha na-ebu ọtụtụ afọ gara aga. Ugbu a, omume kachasị mma abụghị iji mechaa akara ahụ, kama ịgbanwe ya, na ụzọ kachasị mma isi mee nke a bụ site na ime ka obere akara ya, dị ka ihe IBM mere na ThinkPad ya, tupu ịre Lenovo akara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahịa » HP dị azụ: Ekwesịrị ịnyegharị aha ya "Compaq"
Abaghị uru nke e-azụmahịa na ụlọ ọrụ